Sir Culus + Fadeexo: Qorshaha Beesha Caalamka ee Dagaalada Puntland |
Sir Culus + Fadeexo: Qorshaha Beesha Caalamka ee Dagaalada Puntland
purchase sildenafil Erectalis buy online, clomid reviews. , acquire Zoloft.
Muxuu uga aamusay Wakiilka xog-hayaha guud ee qaramada midoobey arrimaha Soomaaliya Danjire Michael Keating dagaalada Alshabaab ku qaadeen maamulka Putnland.
Arinkaan aamusnaanta ah waa fadeexad iyo waji gabax in shacab nabad ku nool dagaal lagaliyo. Beesha caalamku waxay hore u cambaareyn jireen weerarada alshabaab Gaari la Qarxiyay ama Hotel la weeraro, Xagee aadeen wakiiladii beesha caalamku. Maxaase hada aamusiyey?.
Wakiilka xog-hayaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Danjire Mechael Keating ayaa waji colaadeed u muujiyey Dagaalka u dhaxeeya maamulka Puntland iyo alshabaab isagoo ka aamusay.
Beesha caalamka ayaa muujinaysa in ay raali ka yihiin in dadka reer Puntland dagaal lagaliyo. Si Ciidamada Amisom loo geyso waana arin shirqool caalami ah.
Arinkaa waxaa ka gadooday oo midnimo muujiyey shacabka reer puntland oo maamulkooda ku taageeray inay iska difaacaan cadawga soo weerarey ee alshabaab kuwaas oo hada ka dagaalamaya dhulka Xeebta ku dherersan.
Madaxweynaha puntland Dr Gaas mar uu ka hadlayey duulaanka Alshabaab ee Puntland iyo waxa ay ku hindiseen ayuu sheegay in Alshabaab ay koonfurta Soomaaliya ku guulaysteen iskudayo fara badan islamarkaasina ay xitaa weeraro uga guulaysteen ciidamada Midowga Africa ee AMISOM taas oo hadda ku dhalisay inay alshabaab aaminaan inay awood leeyihiin oo ay weeraraan dhulka nabadda ah ee Puntland.
Ugu dambayntii Gaas waxaa uu sheeagay in Puntland iyo shacabkeedu ay iskaga filan yihiin Argagixisadaan, ayna dhulkeeda ka sifayn doonto dhawaan.
Danjire Keating ayaa waxa uu la aamusay loo malaynayaa inuu ka xanaaqay heestii loo sameeyey beesha caalamka iyo gumaysigeeda.
Dagaalku wuxuu socdaa mudo ku dhaw shan maalmood danjirayaasha beesha caalamka u fadhiya soomaaliya wali cidka hadashay ma jirto sida:
Danjiraha urur goboleedka IGAD,
Danjiraha Midowga Yurub, iyo midowga Afrika oo dhammaantood waxay raali ka yihiin in Puntland noqoto dhul colaadeed oo Alshabaabku ka dagaalamaan sida hada muuqata.
Waxaa arintaan ka daran hadalkii Madaxweyne Xasan sheekh oo yiri mar uu ka hadlayay dagaalka ka socda Puntland”Dagaalka Alshabaab ay ka bilaabeyn deegaanada maamulka Puntland ma ahan mid nooga duwan dagaalada ka socda gobalada kale ee Somalia marka shacabka Soomaaliyeed ha Ogaadaan in Alshabaab ay noo wada yihiin cadaw”
Waxaan ku talinayaa in reer Puntland Sheekh, Siyaasi, Waxgarad, haween, iyo dhalinyaro ay u midobaan halista iyo duulaanka alshabaab, kooxdaan hadii la dhalayal sado waxaa hubaal ah in Puntland ay noqon doonto meel ka daran Koonfurta Somalia oo dhiiga masaakiinta maalin walba xaqdaro loo daadin doono reer koonfurtana waxaan leeyahay alshabaab aan u midowno caruurtana aan ka reebano.
W/Q: Maxamed Maxamuud Nuur Caalim
Aqoon-yahan ka faallooda Arimaha SOMALIA